Bounce Shoe Factory - Isitolo esidayisa yonke impahla Bounce Shoe Abakhiqizi, Suppliers
Isicathulo seBounce JB168
Izicathulo zeBunce zenza ukuzivocavoca kuzizwe njengokuhamba okujwayelekile epaki. Izicathulo zethu ze-kangaroo zenzelwe ngokukhethekile ukukunikeza ukuzivocavoca okunomthelela ophansi okuholela ekulahlekelweni kwekhalori ngokushesha.
Kuhlonyelwe isiphethu esiguqukayo, izicathulo ezishayayo ziyamangaza futhi kulula emadolweni akho lapho wenza ukweqa okukhulu. Iqinisekisa ukuthi nabasebenzisi asebekhulile bangenza ukunyakaza okukhulu ngaphandle kokukhathazeka ngokulimala.
Ngeza umfutho emisebenzini yakho ejwayelekile yansuku zonke njengokuhamba noma ukugijima ngokugqoka izicathulo zeqa ngenkathi usohambeni. Akusizi nje kuphela ukuthi ulahlekelwe ama-calories, kodwa futhi kungenza ukuthi uhambe ngokushesha ngomzamo omncane.
Okungcono kakhulu, amabhuzu ama-kangaroo eza ngemibala eminingi, ekunikeza ithuba lokukhetha okulungele. Jabulela umuzwa wokuzivocavoca oyingqayizivele ngokugqoka izicathulo zenyanga lapho usuzivocavoca umzimba.
Isicathulo seBounce JB167